Sinikeza ngemikhiqizo ehlukanisayo kufaka phakathi ibhulashi lokuhlanza ubuso, isikhumba sesikhumba ebusweni, umenzi wemaski, ibhulashi lokwenza ugesi, isikhuphuli esimnyama nokunye.
Ukunakekelwa kwesikhumba kwemvelo Umshini we-automic ku-DIY face mask
Ubuso be-Spatula Machine Face Ultrasonic Skin Scrubber
Abicah Ultrasonic Muhle Electric Electric Cleansing ...
Usizo Lobuchwepheshe Lokususa Umshini we-Blackhead Remover
Electric ukuncela ebusweni Khombisa Wifi Blackhea ...
Ebusweni blackhead remover cleaner extractor beauty mac ...
Elishajekayo ephathekayo Manual Electric Engagqwali Stee ...
Ukushisa Okusheshayo Electric Air Blow Dry Function Volume S ...
Umthombo Factory Direct Supply Private Ilebula Multifunc ...
Izinwele Ikama Straightener Izinwele Straightener Electric Brush
5 in 1 new professional hair curler Electric hair cu ...
Isiqondisi sezinwele esisha esimnyama esimnyama
Izithelo zemifino buso busika umshini ithebula le-effervescent ...
Electric Silicone Manzi USB elishajekayo Scrub ...
Manzi Vibration Electric Silicone Shower Ibhulashi ...
1. Jabulela amakhulukhulu obuso obuso ngezinto zokwakha zemvelo
2. Qedela imaski yakho yobuso ngemizuzu emi-5
3. Ukushisa ngokuzenzakalela uhlanganise impahla
4. Uhlelo oluzenzakalelayo oluhlanzekile
5.Ikhwalithi enhle yemaski eyenziwe nge-ABS
6. Kulula ukusebenza nge-smart voice ukusakaza nenkinobho eyodwa
7. Ngenelise izinga lokuphepha eYurophu naseMelika
Izinhlobonhlobo zezinwele ongazikhetha, izinketho zokulawula ukushisa okuthuthukile: Isibonisi se-LED amasethingi okushisa ahlukene, asukela ku-250 F kuye ku-450 F, ukukunikeza ukukhetha nokuzilawula okukhulu. I-straightener yebhulashi ibuye ibe nokukhiya kokuphepha kanye nokucisha okungamuntu okungamamitha angama-30. Ungakhetha okuhle kakhulu kuwe futhi uhlobo lwezinwele zakho lubonakala kalula kwisibonisi se-LED.
I-Wooden Handle Lash Yokuhlanza Ibhulashi
Okubalulekile: Isibambo sokwenziwa kwezinwele / izinkuni, / ishubhu le-aluminium
Umsebenzi: Hlanza ama-pores esikhumba, susa amakhanda amnyama bese ukhipha
Umumo webhulashi: Umumo oyisicaba / ukuma okuyindilinga / ukuma kwembali
I-5 ku-1 entsha yezinwele zezinwele ezisebenza ngogesi Isethi yezinwele zikagesi
Izibani ze-LED futhi izinga lokushisa
1 st lokushisa I-150 ° C (300 ° F)
Ukushisa okuphezulu okungu-2 I-210 ° C (410 ° F)
Intambo engu-360 degree swivel
Intambo engu-2m ejikelezayo for isitayela-tangle futhi kulula
Intambo kagesi engu-25m
Ikhwalithi yekhwalithi ephezulu ye-oxygen ekhethiwe.
Ukusebenza kwe-Electrical kuzinzile.
I-Handable Handable Manual Electric Stainless Steel Ekhaleni Lokususa Izinwele
ISITAYELA SOMZIMBA WOKWENZA NESITOLO
IKHANDA LOKUSIKA LE-3D
Ibhulashi lezimonyo elisebenza ngogesi
New Smart Electric Makeup Brush indlela osebenzisa ngayo izimonyo. Ikhanda lethu lebhulashi elizungezayo elilinganiswe ngokuphelele liletha ukuhlangana okungenaphutha kwemiphumela ebukeka yemvelo njalo.
Amakhanda webhulashi wekhwalithi ephezulu asebenza ngezimonyo zakho ozithandayo.
Ekugcineni, ithuluzi lokusebenzisa elisebenziseka kalula eliqeda amaphutha okwenza izimonyo.
Umfakisicelo Womlingo I-Lazy Makeup Eye Shadow Silicone Seal Eyeshadow
I-3 ku-1 EYE SHADOW STAMP: Ithuluzi lokwenza imilingo, i-3sizes Charmingeye makeup.
I-EASYTO APPLY CUT CREASE NESITHUNZI SESO: Sebenzisa ukwakheka kwamehlo kalula futhi kusheshe kakhulu.
Ibhulashi lokwakheka lesisekelo esiphathekayo
Igama lomkhiqizo: Ibhulashi lokwakheka lesisekelo esiphathekayo
Isithako esiyinhloko: izinwele zokwenziwa + isibambo se-Aluminium + isibambo
Electric Makeup Powder Puff 3D Electric Electric Ubuhle
Amandla: Ngaphansi kuka-80mA / 3V
Isisindo sisonke: 50g (Isixhobo Esikhuthazayo Sokudonsa + 2 Ukudonsa)
Izithelo zemifino yobuso buso bomshini amaphilisi we-DIY ebusweni
1. 32 ama-PC ibhokisi ngalinye. Ingcezu ngayinye ye-1.2g, isiyonke ngama-38.4g
2. Iphakheji ifakiwe: 32pcs./1set Anti Aging Wrinkle Moisturizing Wrinkle Pills
3. Isithako: Carrageenan, PEG-5M, tartaric acid, glucomannan, sodium carbonate, maltodextrin, sodium bicarbonate, potassium chloride.
I-Electric Silicone Waterproof USB Rechargeable Scrub Brusing Cleansing Brush
1. I-Super Hygienic Soft Silicone yangaphandle enjoloba ihlinzeka ngobuso obuthambile nobungokwemvelo kakhulu kobuso nokusikhipha umzimba kuzo zonke izinhlobo zesikhumba ezivamile.
2.Finyelela ukuzethemba okucacile ebusweni bakho ngebala elicebile, elibushelelezi, elinempilo, nelikhanyayo. Susa ngobumnene ukwakheka okuqinile, izimbotshana ezijulile ezihlanzekile, wehlise amakhanda amnyama ngamandla agcwele nomzamo omncane ukuze ukhanye kahle ngesikhumba esisha esikhanyayo.
3. Ukuma kwesitayela se-oval, esisebenzisekayo okwenza kube lula ukuphatha futhi kube lula ukuhambisa. Ukuhlanza ubuso ngeyunithi elula yokubamba ngesandla, akudingeki ukuthi ushintshe ikhanda lebhulashi. Amadivayisi wokushaja abangochwepheshe. Imali ephelele ngamahora ama-3 futhi ingasetshenziswa izikhathi ezingama-200.
4. Lo mkhiqizo u-IPX7 awunamanzi, ungawusebenzisa eshaweni nakubhavu.